Basket-ball- Fifaninanam-pirenena :: Fantatra ireo ekipa tafakatra amin’ny ampahefa-dalana • AoRaha
Basket-ball- Fifaninanam-pirenena Fantatra ireo ekipa tafakatra amin’ny ampahefa-dalana
Nifarana omaly ireo lalaom-bondrona amin’ny fifaninanam-pirenena eo amin’ny taranja basket-ball teny amin’ny lapan’ny Tanora sy fanatanjahantena, eny Mahamasina. Fantatra ireo ekipa lehilahy valo sy vehivavy valo hiatrika izany.
Mbola mitohy ny lalan’ny ekipa, sokajy lehilahy ao amin’ny Cospn sy ny sokajy vehivavy ao amin’ny Mb2all, tompondakan’i Madagasikara amin’ity taranja ity tamin’ny taona 2018.
Tafakatra amin’ny dingana famaranana, izay hatao manomboka amin’ny zoma ho avy izao, eo amin’ny sokajy vehivavy, ny Mb2all, ny BC Est, ny SBBC, ny Ascut, ny Ankaratra, ny Asa, ny Tamifa ary ny JEA. Andrasana ny lalaon’ny Mb2all, mitarika vonjimaika ny filaharana, sy ny BC Est. Fandresena impito nisesy no vokatra azon’ity tompondaka tamin’ny taon-dasa ity. Eo ihany koa ny fihaonanan’ny SBBC, laharana faharoa, sy ny Ascut.
Hiatrika ny dingana ampahefa-dalana eo amin’ny sokajy lehilahy kosa ny GNBC, ny Cosfa, ny Cospn, ny Mb2all, ny Cosmos, ny Sebam, ny ASCB ary ny Ascut. Miandry ny fifandonan’ny GNBC sy ny Cosfa ireo mpanaraka sy mpankafy ny taranja. Mbola mitarika vonjimaika ny filaharana ihany koa ity tompondaka farany ity.
Haka aina kely ireo klioba enina ambin’ny folo anio mialoha ny hiatrika ny ampahefa-dalana rahampitso. Hotanterahina amin’ny sabotsy ho avy izao kosa ny lalao manasa-dalana. Ho fantatra amin’ny alahady ny ekipa sokajy lehilahy ho voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara amin’ity taom-pilalaovana ity. Handray anjara amin’ny “Basket-ball Africa league” ihany koa izany klioba mpandresy izany.
Ny klioba sokajy vehivavy ho tompondakan’i Madagasikara indray no hisolo tena ny ekipa malagasy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, amin’ny volana desambra ho avy izao.
Toby fiantsonan’ny taksiborosy :: Mandà hifindra eny Andohantapenaka ireo kaoperativa amin’ny lalam-pirenena faharoa